मिलेनियल एचएनआई र धन व्यवस्थापन - क्यारियर र पैसा
क्यारियर र पैसा
साथी र परिवार
विज्ञ कुराकानी: मिलेनियल HNIs र धन व्यवस्थापन
Expert Talk Millenial Hnis
२०२१ साल एक गम्भीर दुर्घटनाको साथ शुरू भयो किनभने विश्वका शक्तिशाली उद्देश्यपूर्ण महिलाहरूले गिलासको सिलिings्गहरू तोडेका थिए। कमला ह्यारिसले अमेरिकाको उप-राष्ट्रपति हुने पहिलो महिलाको रूपमा इतिहास बनाइन्। यस निर्णायक विजयको नजिकबाट अनुसरण गर्दै, डेटि app अनुप्रयोग बम्बलका संस्थापक र सीईओ, ह्विटनी वोल्फे हर्ड, उनको कम्पनी सार्वजनिक भए पछि सबैभन्दा कान्छो स्व-निर्मित महिला टेक अरबपति भए।
स्पष्ट रूपमा, आजका महिलाहरूलाई उनीहरूको सपना प्राप्त गर्न र उनीहरूको आ-आफ्नो क्षेत्रको उच्च स्तरमा पुग्न रोक्ने कुनै उपाय छैन। सहस्राब्दी महिलाहरूका लागि, संसार उनीहरूको सिप हो। शिक्षा द्वारा समर्थित, सहस्राब्दी महिलाहरु राम्रो स्थिति मा छन् कि अब धेरै अवसरहरु को उपयोग गर्न को लागी आउन सक्छ जो आफ्नो बाटो आउन सक्छ। जहाँसम्म तपाई बाहिर जानुहुन्छ र कांचको सिलि break्ग तोड्दा तपाईलाई यो बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ कि तपाईले एक राम्रो क्यारियर चलाउनका साथ तपाईले आफ्नो फाईनेन्सको पनि विवेकपूर्वक योजना गर्नु पर्छ। तपाईं पहिले नै सम्पत्ति सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईंले आफ्नो धन व्यवस्थापन, बढाउन, र संरक्षण गर्न आवश्यक छ।
एक फाँसी जस्तै तपाइँको वित्त Acing!
सहस्राब्दी पुस्तासँग सम्बन्धित महिलाको रूपमा, तपाईंले सम्भवत भर्खरको कार्यबलमा प्रवेश गर्नुभयो वा तपाईंको क्यारियरमा बाह्र पन्ध्र वर्षको हुनुहुन्छ। यसैले तपाईको लामो लगानीको समय सीमालाई ध्यानमा राख्दै तपाईले आफ्नो कम्तिमा portfolio०% पोर्टफोलियोमा इक्विटीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। इक्विटीहरू, दिमागमा राख्नुहोस्, दीर्घकालीन विकासको एक वाहन हो। छोटो अवधिको अवधिमा इक्विटीहरू अस्थिर हुन सक्छन् र कम देखि नकरात्मक उत्पन्न गर्न सक्छन्। यद्यपि दीर्घकालीन अवधिमा उनीहरू राम्रो प्रदर्शन गर्न थाल्छन्। यसले तपाईंलाई घर खरीद गर्न वा सेवानिवृत्ति कोष सिर्जना गर्ने जस्ता ठूला लक्ष्यहरूको लागि बचत गर्न मद्दत गर्दछ। एकै साथ तपाईले यो पनि निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईको पैसा राम्रोसँग सुरक्षित छ र तपाईको अद्वितीय आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सक्षम छ। यसैले, तपाईं पनि ofण म्युचुअल कोष र निर्दिष्ट सरकारी योजनाहरु र लगानी योजनाहरु मा आफ्नो पैसा को एक हिस्सा लगानी विचार गर्न पर्छ। सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएर, तपाईं बढ्न र तपाईंको पैसा रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
तल सूचीकृत केही थम्ब नियमहरू छन् जुन तपाईले पालना गर्नु पर्छ जब तपाई आफ्नो वित्तीय योजना को यात्रा मा शुरू गर्नु पर्छ।
तपाईले पैसा कमाउने कडा हिस्सा गरिसक्नु भएको छ, अब त्यस पैसालाई बचाउन र बढाउने समय हो।
तपाईंको बचत र लगानी यात्रा तपाईंले आफ्नो आय यात्रा सुरु गर्ने बित्तिकै सुरु हुनुपर्छ।
तपाईं बजेट को बारे मा बुद्धिमान हुनुपर्छ। तपाईको मन्त्र सदा बढी बचत गर्न, कम खर्च गर्ने, र तपाईको खर्च गर्ने बानीको बारेमा इमानदार हुनुपर्दछ।
विवेकी खर्चहरू पूरा गर्न वा छोटो अवधिको लक्ष्यहरूको लागि क्रेडिट कार्डमा भरोसा नगर्नुहोस्।
तपाईको क्यारियरको सुरुमा विशाल debtण, अर्थात् ठूलो bigण लिनुहोस्।
यदि तपाईंले loanण लिएको छ भने, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग कम्तिमा months महिनाका लायक ईएमआई एक सुरक्षित लगानी वाहनमा राखिएको हुन्छ।
तपाईंको धन प्रबन्धन योजनाको सफलताको कुञ्जी विविधता हो - यस तरिकाले तपाईंको पोर्टफोलियो कहिल्यै फेसनबाट बाहिरिनेछैन।
एक व्यवस्थित लगानी योजना (SIP) सुरु गर्नुहोस् र यसमा लामो अवधिको लागि लगानी गर्नुहोस् - एक SIP एउटा लगानी वाहन हो जसले तपाईंलाई तपाईंको रुचिको लगानीमा र निश्चित अन्तरालमा निश्चित रूपले पैसा लगानी गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ। तपाईं साना सुरू गर्न सक्नुहुन्छ र समयसँगै लगानीको रकम बढाउन सक्नुहुन्छ।
एक बीमा नीति खरीद गर्नुहोस् जसले अप्रत्याशित परिस्थितिको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
अनुशासनित हुनुहोस् र तपाईंको लगानी योजना न्यायपूर्वक अनुसरण गर्नुहोस्।
एक DIY दृष्टिकोण सधैं काम नगर्न सक्छ जब यो धन व्यवस्थापनको आउँदछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पैसा र लगानीको बारेमा कुराकानी गर्न नडराउनुहोस्।
तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरूको सेटको साथ एक अद्वितीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंको वित्तीय योजना समान रूपले अद्वितीय छ र समग्र रूपमा तपाईंको आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि आज तपाईंसँग डिजिटल समाधान र उपकरणहरूको एक विशाल सूटमा पहुँच छ जुन राम्रोसँग बुझ्न र तपाईंको वित्तीय योजनाहरूको लागि लाभ लिन सकिन्छ। यी उपकरणहरूले SIP क्यालकुलेटरहरू, बजेट गर्ने अनुप्रयोगहरू र वित्तीय योजना अनुप्रयोगहरू समावेश गर्दछ। अविश्वसनीय रूपमा, तत्काल तृप्तिको रोमाञ्चलाई बेवास्ता गर्न र तपाईं केवल एक पटक मात्र (YOLO) तर्कको साथ बहस गर्न गाह्रो छ। जे होस्, तपाईंको भोलि सुरक्षित गर्न, आफ्नै सर्तमा बाँच्न जारी राख्नुहोस् र आज तपाईंको सम्पत्ति योजनाको यात्रा सुरू गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: सहस्राब्दीहरूको वित्तीय आवश्यकताहरू बुझ्दै
के म मेरो अनुहारमा बेकिंग पाउडर प्रयोग गर्न सक्छु?
फेमिना पावर ब्रान्डहरू
मनिका बत्रा दोस्रो पटक टेबल टेनिस राष्ट्रिय खेलाडी
J स्कर्टहरू पीसीजेको संग्रहबाट जुन तपाइँको गर्मी ईच्छा सूचीमा हुनुपर्दछ
अन्तर्राष्ट्रिय ड्राई शैम्पू दिन: Fac तथ्यहरू बनाम मिथकहरू तपाईंले जान्नु आवश्यक छ
फ्युरी रिल्ट: बिना शर्त प्यारको विचारलाई पुन: परिभाषित गर्ने सेलेब्स!
किन तपाईं आफ्नो आहार मा हरियो एप्पल शामिल गर्नु पर्छ
२०२१ का लागि सेलेब-स्वीकृत स्वीमवेयर
आफैँलाई घरमा एक उत्तम अनुहार प्रदान गर्न चरण-देखि-चरण गाइड
कठिन समयमा मानसिक तनावको सामना गर्दै
जम्पिंग अवरोधहरूको रानी: MD Valsamma
१० ठाडो, सेलिब्रेट स्वीकृत तरिकाहरू बटन अप ट्रेंड कोशिस गर्न
Times टाइम्स शनाया कपूरले हामीलाई उनको ब्यूटी लुकमा ओब्ससि। गर्दैं
मेक अप गर्नुहोस्
तपाईंको सप्ताहन्त सफाई कार्यतालिका लागि १ T सल्लाहहरू
Robinsicecream पत्रिका - महिलाहरु सबैभन्दा नयाँ जानकारी फैशन, सौन्दर्य, स्वास्थ्य र सम्बन्ध सुझावहरूको प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ एक मंच।
प्राकृतिक अनावश्यक अनुहारको कपालबाट कसरी छुटकारा पाउने
कपालको विकासको लागि उत्तम घरेलु उपचार
कसरी कपाल झर्नुबाट तपाईको कपाल लाई जोगाउने
भारतीय लामो कपालको लागि स्तरित कपाल कटाई
छाला मा पकाउने सोडा को प्रभाव
कसरी कपाल घरेलु उपचारलाई अझ मजबुत बनाउने
केटीहरु को लागी अगाडि कपाल शैली
तपाईलाई सुविधाहरू र प्रकार्य प्रशिक्षणको प्रकारहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्दछ
Fashion फेशन ब्लगरहरू जसले स्टाइलिंग सजिलो देखिन्छ
एक दुलही सौंदर्य किट को लागी आवश्यक हुनु पर्छ
विज्ञ बोल्नुहुन्छ: रजोनिवृत्ति पछि सेक्स — मनोवैज्ञानिक कारक
आमा स्पार्सले फेमिनाको सर्वाधिक मूल्यवान् आमा र बच्चा ब्रान्ड २०२० लाई बनाउँछिन्